ADDIS ABABA: Milateri Jidadka oo dhan, Isgaarsiintii oo hawada laga saaray, RW Dr Abiy oo soo muuqday & Wararkii u dambeeyey. – Puntlandtimes
ADDIS ABABA: Milateri Jidadka oo dhan, Isgaarsiintii oo hawada laga saaray, RW Dr Abiy oo soo muuqday & Wararkii u dambeeyey.
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee kasoo baxaya xaaladda magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in ay wali xiran yihiin inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaaladaas, gaar ahaana kuwa gala Xarumaha Booliska, Baarlamaanka, Guriga madaxweynaha & Kan Raysalwasaaraha dalka Itoobiya, waxaana dhooban Milateriga oo ku hubeysan dabaabadka dagaalka.
War laga baahiyey TV-ga dawladda Itoobiya ee EBC ayaa muujinaya Ra`iisulwasaare Abiy Ahmed oo la hadlay ciidamo katirsan Milateriga dalka, balse ma cada in ay yihiin kuwii gadoodsanaa iyo kuwa kale, waxaana la arkayey Kuxigeenkiisa oo kasoo jeeda Qowmiyada Amxaaradda oo bartanka uga jira Milateri.
#EBC ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐቢይ አህመድ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ያደረጉትን ውይይት እንዲሁም በኦነግ ትጥቅ መፍታት አለመፍታት ጉዳይ ላይ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡
Posted by Ethiopian Broadcasting Corporation on Wednesday, October 10, 2018
Warar soo baxay ayaa sheegaya in ay ciidamo gadoodsan oo ka cabanaya Mushaarkooda oo yar ay gudaha u galeen Madaxtooyada Itoobiya, laakiin xogo is khilaafsan ayaa ka soo baxaya cabashada laftirkeeda.
Taliyaha ciidamada Booliska Faderaalka Itoobiya ayaa sheegay in aysan wax dhib ah jirin, balse wuxuusan soo qadin arrimaha ku wajahan Isgaarsiinta la joojiyey iyo wararka ku gadaaman, sidaas oo kale ma uusan sheegin waxa wali jidadku u xiran yihiin.
Wariyaal ka madax banaan warbaahinta dawladda oo kasoo jeeda Itoobiya, kuna sugan daafaha dunida qaarkood ayaa sheegay in uu dhacay isku day Afgambi, balse sidda muuqata uu Ra`iisulwasaare Dr Abiy Ahmed ka hortagay oo uusanba xiligaas kusugneyn Aqalka Madaxtooyada ee ciidamadu tageen.
LA SOCO WARARKEENA DAMBE RIIX HALKAAN